Midira amin'ny maha mpivarotra anao Misoratra anarana amin'ny maha mpivarotra anao
Amidio ny fiaranao
AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaao ArubaAostraliaAotrisyAzerbaijanBahamas TheBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBoliviaBosnia sy HerzegovinaBotsoanaNosy BouvetBrezilaBritish Indian Ocean TerritoryBroneyBolgariaBurkina FasoBurundiKambodzaKameronaKanadaKanadaCape VerdeNosy CaymanRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaNosy KrismasyNosy Cocos (Keeling)KolombiaComoresCongoNy Repoblika Demokratikan'i TheCook IslandsCosta RicaCote D'Ivoire (Côte d'Ivoire)Kroaty (Hrvatska)KiobàSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaTimor atsinananaEkoateraEjiptaEl SalvadorGinea EkoatorialyEritreaEstoniaEthiopiaNosy FalklandNosy FaroeNosy FidjiFailandyFailandyFrantsaGuyane frantsayPolinezia frantsayFrantsay Faritany AtsimoGabonGambia TheGeorgiaAlemainaGhanaGibraltarGresyGroenlandyGrenadyGuadeloupeGuamGuatemalaGuernsey sy AlderneyGineaGuinée-BissauGoianaHaitiHeard sy McDonald IslandsHondurasHong Kong SARHongriaIslandyIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndoneziaIranIrakIrlandyIsiraelyItaliaJamaikaJapanaJerseyJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKorea AvaratraKorea AtsimoKoetyKyrgyzstanLaosLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgLuxembourgMacau SARMakedoniaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaMan (Isle of)Nosy MarshallMartiniqueMaoritaniaMaorisyMayotteMeksikaMikrôneziaMoldaviaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlands AntillesNetherlands TheNew CaledoniaNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaNiueNosy Mariana AvaratraNorvezyNorvezyOmanPakistanPalauPalestinianaPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeruFilipinaNosy PitcairnPoloninaPortiogalyPôrtô RikôQatarReunionRomaniaRosiaRosiaRwandaSaint HelenaSaint Kitts sy NevisSaint LuciaSaint Pierre sy MiquelonSaint Vincent sy GrenadinesSaint-BarthelemySaint-Martin (partie française)SamoaSan MarinoSao Tome sy PrincipeArabia SaoditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoAfrika AtsimoSouth GeorgiaSouth SudanEspainaEspainaEspainaEspainaSri LankaSodànaSurinameNosy Svalbard sy Jan MayenSoazilandySoedaSoisaSoisaSoisaSyriaSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandMandehaTokelauTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanNosy Turks sy CaïquesTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafanjakana MitambatraEtazoniaNosy Nosy Ranomasina MaintyUruguayUzbekistanVanuatuNy fanjakana Vatikana (Holy See)Venezoelai VietnamNosy Virijiny (Britanika)Virgin Islands (US)Vondronosy Wallis sy FutunaSahara AndrefanaYemenZambiaZimbaboe
Famatsiam-bola amin'ny fiara
Misoratra anarana amin'ny maha mpivarotra anao
Ireo fepetran'ny tolotrasa ireo dia fandikan-teny voajanahary, ampiharina amin'ny teny Anglisy ny tranonkala. Jereo ny dikan-teny anglisy
Amin'ny fidirana ao amin'ny tranonkala ao https://carros.com, manaiky ny hampifanaraka ireo fepetra momba ny fanompoana, ireo lalàna sy fitsipika azo ampiharina, ary manaiky fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny lalàna eo an-toerana ianao. Raha tsy manaiky ny iray amin'ireto fepetra ireto ianao, dia voarara tsy ampiasaina na miditra amin'ity tranonkala ity. Ireo fitaovana voarakitra ato amin'ity tranonkala ity dia voaro amin'ny alàlan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona sy ny marika.
2. Ampiasao lisansa
Ny fanomezan-dàlana dia omena maimaim-poana ny famoahana dika mitovy ny fampahalalam-baovao (fampahalalana na rindrambaiko) ao amin'ny tranokala Carros.com ho an'ny fijerena manokana fotsiny tsy dia ara-barotra. Ity no fanomezana fahazoan-dàlana, fa tsy famindrana ny lohateny, ary noho ity lisansa ity izay tsy azonao atao:
modify na kopia ny fitaovana;
mampiasa ny fitaovana ho an'ny tanjona ara-barotra, na ho an'ny fampisehoana ampahibemaso (ara-barotra na tsy ara-barotra);
Miezaha hanaparitaka na hamerina amin'ny aterineto izay rindrambaiko rehetra ao amin'ny tranokala Carros.com;
esory ny zon'ny mpamorona na ny fanoratana hafa avy amin'ny fitaovana; na
Alefaso any amin'ny olon-kafa ny fitaovana na misoritra ireo fitaovana amin'ny servisy hafa.
Io fahazoan-dàlana io dia hamarana ny fahazoan-dàlana raha manitsakitsaka ny fepetra rehetra izany ary mety hanafoana ny Carros.com amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tapitra ny fijerinao ireo fitaovana ireo na rehefa vita io fahazoan-dàlana io, dia tsy maintsy mamotika fitaovana entana entana ao an-tananao ianao, na amin'ny endritsoratra elektronika na printy.
Ny fitaovana ao amin'ny tranokala Carros.com dia omena "tahaka ny". Carros.com dia tsy manome antoka na fanehoan-kevitra, ary mandà sy mandà ny fanomezan-toky hafa rehetra, anisan'izany, tsy misy fetra, ny antoka na ny fepetra takian'ny varotra, ny fitadiavana tanjona manokana na ny tsy fandikana ny fananana. tsaina na fanitsakitsahana zo. Ankoatr'izay, Carros.com dia tsy manome antoka na maneho na inona na inona fisehoana mifandraika amin'ny fahamarinam-pitondran-tena, mety ho vokany na azo atokisana amin'ny fampiasana ireo fitaovana ao amin'ny tranonkalany na mifandray amin'ny fitaovana toy izany na amin'ny tranonkala mifandraika amin'ity tranonkala ity.
Na inona na inona toe-javatra, dia tsy maintsy halefa any amin'ny Carros.com na ny mpamatsy azy ny amin'ny fahavoazana (anisan'izany, ny fahavoazana noho ny fahaverezan'ny data na ny tombony, na noho ny tsy fahatomombanana ara-barotra) vokatry ny fampiasana na tsy fahafahana mampiasa ny fitaovana ao anaty fiara. .com. tranonkala, na dia navoakan'ny Carros.com na solontenan'ny Carros.com aza ny fampahafantarana azy na amin'ny fanoratana mikasika ny mety hisian'ny fahavoazana toy izany. Satria ny governemanta sasantsasany dia tsy mamela ny fetran-keloka momba ny fiantohana na ny fetran'ny fatiantoka ho an'ny fanimbana indraindray na eo an-toerana, dia mety tsy mihatra aminao izany fetra izany.
5. Zavamaniry amin'ny fitaovana
Ireo fitaovana izay hita ao amin'ny tranokalan'ny Carros.com dia mety ahitana ny fahadisoana ara-tekinika, soratra na sary. Carros.com dia tsy manome antoka fa ny iray amin'ireo fitaovana ao amin'ny tranonkala dia marina, feno na ankehitriny. Carros.com dia mety hanova ny fitaovana hita ao amin'ny tranonkalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Na izany aza, Carros.com dia tsy manaiky hanavao ireo fitaovana.
Carros.com dia tsy nijery ireo tranonkala mifandraika amin'ny tranonkala ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ireo tranonkala mifandraika. Ny fampidirana rohy rehetra dia tsy midika akory ny fanamarinana nataon'ny Carros.com amin'ny tranonkala. Ny fampiasana tranonkala mifandraika dia amin'ny risika manokana.
Carros.com dia afaka manavao ireo fepetran'ny tolotrasa amin'ny tranokalanao amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, manaiky ny hitazona ny dikan-teny amin'izao fe-potoana izao amin'ny fe-potoam-piasana.
8. Lalàna lalàna
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia fehezin'ny lalàna ary mifehy mifanaraka amin'ny lalàn'i Connecticut ary tsy maintsy hekenao tsy ho eo ambany fahefan'ny fitsarana ao amin'io fanjakana io na ny toerana misy anao.
Ity fepetra ity dia mahomby amin'ny 27 martsa 2019.
Fiara amidy eo akaikiko
Fiara amin'ny kaody zip
Ny marika rehetra
Ny modely rehetra
Manonta ny gazetinay isam-bolana.
Fiara sy kamiao Total